हवाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? नेपाल एयरलाइन्समा ४ हजारसम्म सस्तो छ भाडा — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > हवाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? नेपाल एयरलाइन्समा ४ हजारसम्म सस्तो छ भाडा
काठमाण्डौं । नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानमा निजी एयरलाइन्सले भन्दा चार हजारसम्म सस्तो शुल्कमा सेवा दिइरहेको छ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले गन्तव्य हेरी निजीकोभन्दा ३ सयदेखि चारहजार रुपैयाँसम्म सस्तोमा उडान गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरुले तोकेको भाडाभन्दा निगमले निर्धारण गरेको भाडादर प्रत्येक गन्तव्यमा सस्तो छ।
‘यात्रुहरुको विश्वासनियताकै लागि हामीले धेरै गन्तव्य भन्दा पनि मौजुदा गन्तव्यमै नयाँ विमान थप गरेका छौँ’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यस्तै अब छिट्टै अनलाइन टिकट बुकिङ सुरु भएपछि धेरै समस्या हल भएर जान्छ।’
१८ फागुन २०७३, सेतोपाटी, ११।००
२०७३ फागुुण १८ गते ११:२२ मा प्रकाशित
आजबाट काठमाण्डौंमा २४ सय ट्याम्पो र ८ सय ट्याक्सी, माइक्रो र बस हट्दै
दुई करोड रुपैयाँको दालचिनी निर्यात, दिगो व्यवसाय बन्दै
हिमपहिरोमा ६ भारतीयको मृत्यु
नेपालको कसैसँग पनि शत्रुता छैन प्रधानमन्त्री – केपी ओली
यस्तो छ ‘एसिया पावर बिजनेस वुमन’ निताको सौख !